Imbali ye-Faberge Egg
Umlando othabisayo we-Faberge Eggs
La maqanda awaziwayo kwaye aqokelelwe kakhulu anembali ekhangayo
Indlu yaseF Faberge ibhincinci yasungulwa ngo-1842 nguGustav Faberge. Inkampani iyayaziwa ngokudala amaqanda ama-Easter ama-Easter phakathi kwe-1885 no-1917, ezo ezininzi ezazinikezwa njengezipho kwi-czars yaseRashiya uNiclas II no-Alexander III. Oku kwakukho ngexesha lika-Gustav, unyana kaPetros, owayengumalungu weentsapho zeFiferge owabeka inkampani kwimephu, ngoko kuthetha.
Ngaphambi kokuvelisa amaqanda ayo awaziwayo, uF Faberge wayenomdla wokusebenzisa intsapho yaseRomanovs kwi logo yakhe yeenkampani.
Kwaqala ngowe-1882 kwiMiboniso yasePan-Russian eMoscow. UMaria Feodorovna, umfazi weCzar Alexander III, wathenga i-cufflinks kwinkampani yomyeni wakhe. Ukususela ngelo xesha, abathengi bakaFiterge baquka ubutyebi nozuko.
Iiferge zePergeer Imperial Easter
Ngomnyaka we-1885, i-Faberge wayinqoba iMidal Gold kwi-Exhibition yaseNuremberg ngenxa yeengxelo zeengcebo ze-antich ze Kerch. Kwakhona kwakukuloo nyaka inkampani yakhiqiza iqanda layo lokuqala le-Imperial. Iqanda elilula kakhulu lavuleka ukuze libonakalise "i-yolk." Ngaphakathi kwesikhupha kwakungumkhuhlane wegolide kwaye ngaphakathi kwesikhuni kwakuyi-diamond encinane yesithsaba kunye neqanda elincinci le-ruby.
Leli qanda lokuqala laliyisipho esivela ku-Alexander II ukuya kwiCzarina Maria. Yayikhumbuza ekhaya kunye nonyaka ngamnye emva koko, inkosi yawuthuma iqanda elitsha waza wanika lona umfazi ngexesha lePasika le-Orthodox yaseRashiya. Amaqanda ahamba ngokugqithiseleyo nge-jeweled ngonyaka, ebonisa intsingiselo yembali. Kwaye ngamnye wayemangalisiwe.
Ukususela ngo-1895 ukuya ku-1916, umlandeli ka-Aleksandriya, uNicholas II, wayenikela amaqanda amabini e-Easter ngonyaka, omnye kumkakhe nomnye unina.
Iifama ezingama-Imperial ezingama-50 zenziwe ngama-czars aseRashiya, kodwa eziliqela ziye zalahlekelwa yimbali.
Amaqanda aseMimperial abuyela eRashiya
UMalcolm Forbes wayephethe iqoqo elikhulu le-Faberge elizimeleyo kwaye emva kokufa kwakhe iindlalifa ezigunyaziwe nguSotheby's (ngo-2004) kwintengiso ngaphandle kweqoqo lakhe elikhulu leFergege.
Kodwa ngaphambi kokuba i-intengiso yenzeke, ukuthengiswa kwangasese kwenzeka kwaye yonke iqoqo yathengwa nguVictor Vekselberg waza wabuyela eRashiya.
Akunjalo onke amaqanda ayi-Faberge
Abaqokeleli kufuneka baqaphele izibhengezo zeeFayer okanye ama-Faberge. Ngaphandle kokuba yenziwa yinkampani egunyazisiweyo, akufanele ibizwa ngokuthi yiFiterge. Iikhampani ziza kuhamba malunga nale nto ngokubiza amaqanda "isitayela se-Faberge."
Iphela nkampani inikwe ilayisenisi kwaye igunyazisiweyo ukuvelisa amaqanda angama-Imperial yi-Faberge World. Kananjalo banomntu oqokelelwa ngumqokeleli.
Kukho kwakhona ukuzaliswa okusemthethweni kwamaqanda ama-Imperial, amaqanda adalwa yinzala kaCar Faberge kunye namaqanda anikwe yinkampani egunyazisiweyo ukusebenzisa igama elithi Faberge.
Izizukulwana zikaPetros Carl Faberge nazo zenza amaqanda kwiStelge kwiSt. Petersburg Collection. Ukuba unomdla ngembali yeFergege, qiniseka ukuba ufunde imbali yentsapho yakwaF Faber kwiwebhusayithi. Ziyimpahla yesaveli eziyimfihlelo kwaye iquka ulwazi kwi-copyright kunye nephawu lokuthengisa lwegama leFergege.
Okufuneka Ukwazi Ngokuqokelela I-Morton Pottery
Ibhokisi leCereal Online Prices
I-Auction Fireworks Auction ka-2012
Imithombo Yamandla Okuvelisa
Imbali ye-US Government Financial Assistance
Ngaba Isikolo Sonyango?
Ukutyelelwa kweNtombi kaMariya
Uluhlu lweSomqulu oluPhezulu lwePom
'Iimfazwe zeNkwenkwezi' Inkcazo yomntu: Han Solo
6 Uninzi lwabantu abathandanayo be-Anime Couples
Iingoma zomculo zelizwe ezilungileyo